आमाले डस्टबिनमा फालेको बच्चाको शिशिर भण्डारीले जिम्मा लिए ! सबैले हेरौं र शेयर गरौ (भिडियो हेर्नुस) – Online About
Home/समाचार/आमाले डस्टबिनमा फालेको बच्चाको शिशिर भण्डारीले जिम्मा लिए ! सबैले हेरौं र शेयर गरौ (भिडियो हेर्नुस)
काठमाडौं -केहि समयअघि पशुपति क्षेत्रमा राखिएको फोहोरको डंगुरमा एउटा बच्चा भेटिए । छिनमै खबर फैलियो। त्यसको सुइँको ‘नेपाल स्नेही काख’ नामक संस्थाले पनि पायो। र, बच्चाको अवस्था बुझ्न संस्थाको टोली पशुपति पुग्यो। डस्टबिनमा भेटिएको बालक करिब २० दिनका जस्ता देखिन्थे। ‘शरीर पूरै कालो बनेको थियो। रगत जमेजस्तो। आँखाबाहिरै निस्किएका थिए’, स्नेही काखकी संस्थापक अध्यक्ष नेहा पोखरेलले भनिन् ।
मानसिक सन्तुलन बिग्रिएर सडकमा पुगेका व्यक्ति तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्थाले डस्टबिनमा भेटिएका बालकको संरक्षण गर्न लियो। त्यति मात्र होइन, उनको नामकरण पनि गरिदियो— भविष्य। अहिलेसम्म ती बालककी आमा भेटिएकी छैनन्। तर, फोहोरको थुप्रोमा भेटिएकै दिनदेखि भविष्यकी आमाको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन्, पोखरेलले। बालकको रेखदेख एवं पालनपोषण गरिरहेकी उनी कहिलेकाहीँ राति सुत्न पनि पाउँदिनन्। ‘यसले चिसोभरि सुत्नै दिएन, काखे बानी परेको छ’, उनले भनिन्, ‘बिहान ५ बजे मात्रै एकछिन सुत्छु।’
यसैबिच कलाकार, कार्यक्रम प्रस्तोता तथा पछिल्लो समय सामाजिक काम गरेर सबैको मनको ढुकढुकी बनेका शिशिर भण्डारीले डस्टबिनमा भेटिएका बाबुको जिम्मा लिएका छन् । भविष्यलाई काखमा लिदै मायाले चुम्बन गर्दै भावुक बनेर शिशिर भण्डारीले यस्तो गरे । भिडियो हेर्नुस
काठमाडौं मा बम विस्फोट प्रहरीलाई चकित
सीपीएल ओस्कारमा सन्दिप ‘ब्रेक थ्रु’ स्टार घोषित
काठमाडौंको आकाशमा एकाएक सेनाको हेलिकोप्टर किन घुम्दैछ
खतिवडालाई हटाएर अर्थमन्त्री बन्न चाहनेको मुखमा बुझो, राजिनामाको हल्ला अफवाहमात्र «